Child Hernia အူကျ-မကျ သိပါရစေ - Myanmar Kid World Child Hernia အူကျ-မကျ သိပါရစေ ~ Myanmar Kid World
8:22 PM ကလေးကျန်းမာရေး
အဖြစ်များလို့ မေးတဲ့သူလည်းများတယ်။ အခုပဲသူ့သားလေးငယ်ငယ်မှာဖြစ်နေလို့မေးလာ တယ်။ အရင်ကမေးတွေကို နမူနာသာထည့်ရေးပါမယ်။
၁။ ဆရာ သမီးအဖေက အသက် ၆၅ လောက်ရှိပါပြီ။ အခုအူကျွံတယ်လို့ ဆေးခန်းကဆရာ ကပြောပါတယ်။ ခွဲရမယ်လို့လဲ ပြောပါတယ်။ ခဏခဏအောက်တယ်။ ပြီးတော့ အဖေကအရက်သောက်တက်တယ်။ အဲဒါ စိုးရိမ်ရလားဆရာ။ သမီးကလဲ အဝေးမှာဆိုတော့ စိုးရိမ်နေလိုပါ။
၂။ ဆရာခင်ဗျား ကျနော့် ကလေး လသားလေးမှာ ဆီးခုံမှာ အူကျသလို အသားညှစ်လျှင် ဖောင်းဖောင်းလာပါတယ်။ ဖိပေးလျှင် ပြန်တက်သွားပါတယ် စိုးရိမ်ရပါသလား။ ဘယ်လိုကုသရပါမလဲ။ သားလေ့း့ အတွက်ကူညီပါအုံးဆရာ။
၃။ တူလေးက ငိုရင်ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဆိုးရင်ဖြစ်ဖြစ် ကပ္ပယ်အိတ်လေးတစ်ဖက်က ပိုကြီးလာပါတယ်။ အိပ်ရင် ပြန်သေးသွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ပြန်သေးသွားရင်တော့ ဆီးခုံလေးကဖောင်းနေတတ်ပါတယ်ဆရာ။ ကလေးမိဘတွေကတော့ မခွဲချင်ကြဘူးဆရာ။ သူ့အလိုလိုပျောက်ပြီးပြန်ဖြစ်မှာလဲစိုးကြတယ်ဆရာ။ တခုခုဆို ဆရာ့ကိုမေးလို့ ပြန်ပြန်ဖြေပေးတိုင်း ရောဂါတွေပျောက်သွားသလို အားရှိလှပါတယ်ဆရာ။
၄။ ကျနော်မှာ hernia ရှိနေပါတယ်။ နိုင်ငံခြားခရီးထွက်ရမှာမို့ ဆရာဝန်က အချိန်မီ မကျက်မှာစိုး၍ ခွဲမပေးလိုက်ပါ။ ရေခဲကပ်၍ ဘောင်းဘီကျပ်ကျပ်ဝတ်ရန်ပြောပါသည်။ အလုပ်က စားပွဲမှာ တစ်နေ့ ၉ နာရီ ထိုင်ရပါသည်။ နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာ ခွင့်ပြန်မှ ခွဲရန်စီစဉ်ထားပါသည်။ ရှေ့နှစ် အိမ်ထောင်ပြုမည်ဖြစ်သဖြင့် hernia က သားသမီးကိစ္စကို ထိခိုက်နိုင် မထိခိုက်နိုင် သိလိုပါသည်။ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို သိလိုပါသည်ခင်ဗျာ။
၅။ ကန်တော့နော်ဆရာ ကျွန်တာ့ ညာဖက်အစေ့ဖက်မှာ အူကျတာဖြစ်နေပါတယ်။ ဖြစ်နေတာကတော့ ၅ နစ် လောက် ရှိပါပြီ။ ခွဲစိတ်ဖို့လိုပါသလား။ ခွဲစိတ်သင့်ပါသလား သိချင်ပါတယ်။ အလုပ်ပင်ပန်းရင် တော်တော် ကြီးလားပြီး နည်းနည်းတော့ အောင့်ပါတယ်ဆရာ။
၆။ ဆရာခင်ဗျား ကိုယ့်ကိုယ်ကို အူကျ-မကျ သိရအောင် မည်သို့ စမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်ပါသလဲ။
ယောက်ျားတွေမှာ အဲဒီနေရာမယ် ဖြစ်တဲ့ရောဂါတွေ အဓိက ၄ မျိုးရှိတယ်။
2. Hydrocele မုတ္တရောဂါ၊ (စာတပုဒ် ရေးထားပါတယ်)
3. Epididymitis ကျားအစေ့ရောင်တာ (စာတပုဒ် ရေးထားပါတယ်)နဲ့
4. Varicocele (ဗေရီကိုဆီးလ်) (စာတပုဒ် ရေးထားပါတယ်)သွေးပြန်ကြောထုံးတာတွေ ဖြစ်ကြတယ်။
ယောက်ျားတိုင်းရဲ့ ကပ်ပယ်အိတ် တဖက်စီထဲမယ် ဝှေးစေ့တလုံးစီ ရှိကြရတယ်။ အစေ့အထက်မှာ အထက်အောက် တန်းနေတာကို အကြောလို့ အလွယ်ခေါ်တဲ့ထဲမှာ သွေးကြောတွေ၊ အာရုံကြောနဲ့ သုတ်ရည်ပြွန်အားလုံးက ကပ်နေကြပြီး လက်ချောင်းတချောင်းစာလောက်သာ တုတ်တယ်။
ဗိုက်ထဲမှာသာနေရတဲ့ အူက အောက်ဆင်းပြီး ကပ်ပယ်အိတ်ထဲ ကျလာတာကို (ဟာနီယာ) အူကျတာခေါ်ပါတယ်။ မုတ် ဆိုတဲ့ မုတ္က (ဟိုက်ဒရိုဆီးလ်) ကတော့ အစေ့ကို ဖုံးနေတဲ့ အိတ်ထဲက ပုံမှန်ရှိရမဲ့ ခပ်ပါးပါး အရည်တွေ အများကြီး ဖြစ်လာတာကို ခေါ်တယ်။ အူကျတာနဲ့ မုတ်က မနာကြတာမှာလာတူတယ်။ အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်တာလဲ တူတယ်။ အကြော-အစေ့ ရောင်တယ်ဆိုတာ အတော်နာတယ်။ ဝှေးစေ့ရဲ့ သွေးပြန်ကြောတွေ ဖေါင်းကြွနေတာကို (ဗေရီကိုဆီးလ်) ခေါ်တယ်။ မနာဘူး။
ဒီရောဂါလေးမျိုးအပြင် ရှားရှားပါးပါးတွေလည်း ရှိသေးတယ်။ ဆင်ခြေထောက်ပိုးကြောင့် မုတ်ဖြစ်တာ၊ Hydrocele of testis အစေ့က မုတ်လိုဖြစ်တာ၊ Spermatocele သုတ်ပိုးအိတ်ဖြစ်တာ၊ Testicular torsion အကြောထုံးတာ၊ Testicular cancer အစေ့ ကင်ဆာ နဲ့ TB အစေ့ တီဘီတွေ ဖြစ်တယ်။ Undescended testis မွေးကတည်းက အစေ့ကတဖက်ဖြစ် နှစ်ဘက်လုံးဖြစ်ဖြစ် ကပ်ပဲ့အိတ်ထဲမှာ မရှိတာ။ အစေ့တဖက်တည်းသာစမ်းလို့ရရင် ဒါဖြစ်မယ်။ အောက်အထိမကျဘဲ ပေါင်ခြံမှာဖြစ်ဖြစ် ဗိုက်ထဲဖြစ်ဖြစ် ရှိနေမယ်။ ခွဲစိတ်ပြုပြင်ပေးရတယ်။ (စာတပုဒ် ရေးထားပါတယ်။)
အူကျတာက မတ်တပ်ရပ်ရင် ကျလာမယ်။ ချောင်းဆိုး-နှာချေရင်၊ ပြေးရင်၊-ခုန်ရင်၊ အလေးအပင်မရင်၊ ဗိုက်ကို ညှစ်လိုက်ရင် ထွက်လာမယ်။ ကလေးဆို ငိုရင်စူထွက်လာမယ်။ အိပ်နေရင် သူ့ဖါသာဖြစ်ဖြစ်၊ သွင်းပေးလို့ဖြစ်ဖြစ် ပြန်ဝင်သွားမယ်။
ကျလာတဲ့ အူဆိုတာကို အစေ့ရဲ့အပေါ်မှာ၊ သီးသန့်စမ်းလို့ရတယ်။ မဖြစ်တဲ့ဘက်နဲ့ ယှဉ်ကြည့်ပါ။ ချောင်းအတုဆိုးခိုင်းရင် ကျကျလာလို့၊ ဖေါင်းဖေါင်းလာမယ်။ လှဲအိပ်ခိုင်းတာနဲ့ ဝင်သွားမယ်။ ကျလာတဲ့နေရာက ဗိုက်အောက်ပိုင်း၊ ပေါင်ခြံအထက် နေရာကဖြစ်တယ်။ ပြန်သွင်းပေးရင် ထွက်လာတဲ့နေရာဆီကို သွင်းပေးရတယ်။ အတိအကျပြောရင် ကပ်ပဲ့အိတ် အထက်တည့်တည့်၊ ဆီးစပ်ကအရိုးမာမာရဲ့ ဖြစ်တဲ့ဘက် အထက်-ဘေး ၂ လက္မလောက်နေရာပါ။ ကျနေတဲ့အူကို ပြန်သွင်းပြီး၊ မတ်တပ်ရပ်အနေအထားမှာ အဲဒီနေရာမှာ စမ်းတဲ့သူက လက်နဲ့ ဖိ-ပိတ်ထားရင် ချောင်းဆိုးခိုင်းပေမဲ့ အူက ကျမလာဘူး၊ ထွက်ပေါက်ကို ဖိ-ပိတ်ထားလို့ပါ။ ဒါဆို အူကျရောဂါ သေခြာပြီ။
ဗိုက်ကိုဖုံးကာပေးထားတဲ့ ကြွက်သားလွှာက ၃-၄ ထပ်ရှိတယ်။ (ဒါရိုက်ရှင်) လားရာ အမျိုးမျိုး ရှိတယ်။ အထက်-အောက်၊ တစောင်း။ ကြွက်သားတွေက ပေါင်ခြံထိပ်က အရွတ်ရှည်မှာလာတွယ်တာတွေက အူကျတာနဲ့ဆိုင်တယ်။ လာတွယ်ကြတဲ့အခါ ဂဟေဆက်သလို မဟုတ်ဘူး။ အဟလေးတွေ ကျန်နေတယ်။ အဲဒီနေရာလေးတွေက အပေါက်လို ဖြစ်နေလို့ အားနည်းချက်ပဲ။ ဗိုက်ကို တင်းတာညှစ်တာလုပ်တဲ့အခါ ဗိုက်ထဲရှိတာတွေဟာ အပေါက် နေရာတွေကနေ ထွက်ဘို့ ကြိုးစားပါတယ်။ ထွက်လာနိုင်ရင် ဟာနီယာဖြစ်ပြီပေါ့။ ခေါ်တော့သာ အူကျတယ်လို့ အလွယ်ခေါ်တာ၊ ဗိုက်ထဲက အနီးအနားက ထွက်လို့ရတာတွေ ထွက်မှာပဲ။
ကျလာတယ်ဆိုတာ အူသပ်သပ်ကျတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကြွက်သားတွေရဲ့အတွင်းမှာ ဗိုက်တပြင်လုံးကိုဖုံးနေတဲ့ အလွှာပါးပါးလေး ရှိသေးတယ်။ အဲဒီအလွှာက ထွက်မဲ့နေရာကနေ တဖြေးဖြေးချင်း စူစူထွက်လာတာမို့ အိတ်ကလေး ဖြစ်ပြီး၊ အိတ်ထဲမှာသာ အူသိမ်၊ အူမြှေးတွေလဲ ကပ်ပါနေမယ်။ ညာဘက်မှာဖြစ်ရင် အူအတက်ဆိုတာလည်း ပါနိုင်တယ်။ ခွဲစိတ်တဲ့အခါ အဲဒီအိတ်ပါးပါလေးကို ရှာတတ်ရတာကပညာ။ ခွဲထုတ်ယူရတာကပညာ။
(ဟာနီယာ) ဆိုတာ ယောက်ျားတွေ မှာသာဖြစ်တယ် ထင်ကြတယ်။ အမျိုးသမီးတွေလည်းဖြစ်တယ်။ နည်းပါတယ်။ ယောက်ျားတွေကို ခွဲပေးဘူးတာ မရေတွက်နိုင်ပေမဲ့ အမျိုးသမီး ၂ ယောက်သာ ခွဲပေးရဘူးတယ်။ သူတို့မှာ ကပ်ပဲ့အိတ် မဟုတ်ဘဲ မ-အင်္ဂါ နှုတ်ခမ်းသားထဲကို ကျလာတယ်။ သိပ်လဲမကြီးလှဘူး။
(၁) အခုထိရေးခဲ့တာက အများဆုံးဖြစ်တဲ့ ပေါင်ခြံမှာဖြစ်တယ်။ Inguinal hernia ခေါ်တယ်။
(၂) ပေါင်ထိပ်မှာဖြစ်ရင် Femoral hernia ခေါ်ပြီး၊ ဒီအမျိုးအစားက အမျိုးသမီးတွေ ပိုဖြစ်တယ်။
(၃) ကလေးငိုရင် ချက်မှာ စူထွက်လာတာကို Umbilical hernia ခေါ်တယ်။ ကလေးကိုတခါတည်း နာမယ်ပေးတယ်။ ချက်ဖေါင်းလို့။ ကလေးမှာအဲလိုဖြစ်တိုင်းတော့ မခွဲရပါ။ ကလေးအသက် ၁-၂ နှစ်အထိ စောင့်ကြည့်နိုင်တယ်။ အငိုသက်သာလရင်၊ ကြွက်သားအားကောင်းလာရင် အလိုလိုပြန်ပိတ်မယ်။ ၂ နှစ်ကျော်လို့ မပျောက်သေးရင်တော့ ခွဲစိတ်ပြုပြင်သင့်တယ်။
(၄) ဗိုက်ခွဲထားတဲ့ ချုပ်ရိုးနေရာကနေ စူထွက်တာကို Incision hernia ခေါ်တယ်။
(၅) ဗိုက်နဲ့ ရင်ခေါင်းကို ပိုင်းခြားထားပေးတဲ့ ကြွက်သားကြီးမှာဖြစ်ရင် Diaphragmatic hernia ခေါ်တယ်။ Acid Reflux အူကျတာ မဟုတ်တဲ့ (ဟာနီယာ) စာတပုဒ်ထဲမှာ ရေးထားပါတယ်။
ဘာလို့ အူကျတာလဲ။ ဗိုက်ဖုံးကြွက်သားအားနည်းနေသူ၊ ဗိုက်ကို တင်းအားဖြစ်စေမှာတွေ လုပ်တာများလို့ဖြစ်တယ်။ မဖြစ်စေချင်သူတွေ ဒါမျိုး ဆင်ခြင်ရမယ်။ အပြေး-အခုန်၊ အလေးမ၊ အတက်-အဆင်း။ ဒါ့ကြောင့် အားကစားသမား ရောဂါလို့ ထင်ရတယ်။ အမှန်က အဲလိုတော့ မဟုတ်ဘူး။ ခန္ဓာဗေဒက (ပါဖက်) ဆိုရင် မဖြစ်ပါဘူး။
(ဟာနီယာ) သေခြာရင် ခွဲရမှာပါ။ မခွဲဘဲ ယာယီသက်သာအောင် လုပ်တာမျိုးတော့ရှိတယ်။ အသက်ကြီးသူတွေ၊ အခွဲ မခံသင့်သေးသူတွေ ဥပမာ ဆီးချို၊ နှလုံးရောဂါရှိနေသူတွေအတွက်သာ ညွှန်းပါတယ်။ Hernia Belt ခါးပတ်တမျိုး ပတ်ထားရတယ်။ အချိန်ရွေးပြီးခွဲနိုင်ပါတယ်။ တချို့ အသက်အတော်ကြီးမှခွဲတယ်။ သတိထားဘို့တော့ရှိတယ်။ ကြာလေလေ ကြီးလေလေဖြစ်မယ်။ အနေရခက်မယ်။ စိတ်ထဲမှာ ငါ့မှာဒီရောဂါရှိနေတယ်လို့ ကသိကအောင့် ခံစားနေရနိုင်တယ်။
ကလေးတွေမှာလဲ အဖြစ်မနည်းပါ။ ငိုတိုင်းစူထွက်လာမယ်။ အထက်မှာရေးထားသလို အေးအေးဆေးဆေး ခွဲလို့ရပါတယ်။ ကလေးတွေမှာ အူကျတာနဲ့အတူ တွဲဖြစ်တာရှိသလားစစ်ရမယ်။ မုတ်နဲ့တွဲနိုင်တယ်။ အစေ့အောက်မကျတာနဲ့ တွဲနိုင်တယ်။ သိထားဘို့က အူကျတာကို ဆေးထိုးဆေးစာတာနဲ့ မပျောက်ပါ။
ဘယ်တော့ခွဲမလည်း။ အရေးပေါ်မဖြစ်လို့ကတော့ ဘယ်တော့ခွဲခွဲရပါတယ်။ ကျောင်းမထားခင်ခွဲဘို့စဉ်းစားနိုင်တယ်။ လူကြီးတွေ အလုပ်အားချိန်ျမှခွဲလို့ရတယ်။
ယုတ်တရက် နာလာတာကတော့ အရေးပေါ်။ ပြန်မဝင်နိုင်ပဲကျနေတဲ့ အူကခေါက်နေလို့။ အူက ရောင်-နာ-ပိတ်တာ ဖြစ်လာတယ်။ Strangulated Hernia နေ့နေ့-ညည အရေးပေါ် ခွဲရလိမ့်မယ်။ အရေးပေါ်ဖြစ်တာနဲ့ အိပ်ယာမှာ လဲလိုက်ပါ။ အူကျတဲ့ နေရာပေါ်မှာ ရေခဲတင်ပါ။ ရေခဲကို ပလပ်စတစ်အိတ်မှာ ထည့်ပြီး တင်ပါ။ လိုသေးရင် ကုတင်ခြေရင်းပိုင်းကို မြှင့်ထားပါ။ စိတ်ရောကိုယ်ပါ နားလိုက်ပါ။ အစာအမာ မစားနဲ့အုံး။ ၁-၂ နာရီအတွင်း ပြန်ဝင်ရမယ်။ ကိုယ့်ဖါသာ ပြန်သွင်းကြည့်ပါ။ သွင်းတဲ့အခါမှာ ကပ်ပဲ့အိတ်ကနေ အထက်၊ နောက်၊ ဘေးဘက်ဆီ ဦးတည်ပါ။ ဝင်သွားပါလိမ့်မယ်။ ၂-၃ နာရီမှ မဝင်ရင် ဆရာဝန်ပြပါ။ ဆရာဝန်က ငြိမ်ဆေး၊ အ်ိပ်ဆေးထိုးပေးမယ်။ သွင်းကြည့်မယ်။ ဆရာဝန်မှသွင်းမရရင် ညဉ့်နက်သန်းကောင်ဆိုလည်း ခွဲရမယ်။ နိုင်ငံခြားရောက်နေလည်း ခွဲရပါလိမ့်မယ်။
ခွဲစိတ်တာက ထမင်းစားရေသောက် ပြောရမလောက်ပါ။ ဆရာဝန်များ ခွဲတာစိတ်တာ လက်တွေ့သင်ရင် ပန်းငုံတာကနေ စကြရတယ်။ ဒိနောက်မှာ မုတ်ခွဲတာ။ ဒိနောက်မှာ (ဟာနီယာ) ခွဲရတယ်။ အတွေ့အကြုံတော့ လိုတယ်။ တခါတလေ ခွဲရင်းနဲ့ အိတ် ရှာမတွေ့ရင် တောအုပ်ထဲ လမ်းပျောက်သူလဲ ဖြစ်တတ်တယ်။ ခွဲပြီးမှ ပြန်ဖြစ်သူတွေလည်း ရှိတတ်တယ်။ အသက်ကြီးသူတွေအတွက်တော့ နည်းနည်း ပိုလုပ်ပေးရတာမျိုးရှိတယ်။ ဖါထေးရတာမျိုး။ ဇရာက ဆရာဝန်တွေကို ပိုဒုက္ခပေးပါတယ်။
ပူအိုက်တဲ့ နွေရာသီအတွင်း မိမိကလေးငယ် ပြုစုစောင့်ရှောက်နည်းများ
နွေရာသီရဲ့ ပြင်းတဲ့အပူချိန်ကြောင့်၊ မိတ်၊ အရေးပြားပေါ် အဖုအပိမ့် အနီကွက်တို့နဲ့ တခြားပြသနာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီပူအိုက်တဲ့ရာသီမှာ မိခင်တွေ...
လေဖြတ်ခြင်/လေဖြန်းခြင်းနဲ့ Heart Attack တို့ရဲ့ မတူညီတဲ့လက္ခဏာရပ်များ
လေဖြတ်/လေဖြန်းခြင်း (Stoke) နဲ့ Heart Attack တို့ဟာ မတူညီဘူးလို့ ဆေးပညာရှင်တွေက ဆိုပါတယ်။ ရှေ့ပြေးနိမိတ်တွေ ပြတဲ့အခါမှာ တစ်ချို့ကိစ္စရပ်...